Miampanga Mpanao Gazety ao amin’ny Twitter ny Filohan’i Panama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2013 4:54 GMT
Matetika loatra ny Filoha Ricardo Martinelli (@rmartinelli) [es] no mahatezitra ny mpiserasera Panameana noho ny fisiahana mampiady hevitra sy mampiady tsotra izao, ary tonga hatramin'ny fanompana aza.
Ny ohatra akaiky indrindra dia ny sioka nalefa mivantana tamin'ny mpanao gazety Santiago Cumbrera avy ao amin'ny La Prensa, gazety iray efa nifandona tamin'ny filoha taloha:
@rmartinelli: Ho an'ny rehetra tsy mahalala hoe nahoana i Santiago Cumbrera no mankahala ahy satria noroahina noho ny fanohintohinana sy fandrebirebena vehivavy.
Nandritra ny fotoana niasany ny filoha, izay mamarana azy amin'ity taona ity, no tsy nitsahatra ny nifanasa vangy tamin'ny media, izay ompainy, ampangainy ho mpampiodina, dia avy eo miala tsiny ary mampanantena ny hiova.
Efa nisy tantarany ny fiampangana an'i Cumbrera. EPASA [es] dia mpamoaka gazety telo be mpamaky: La Crítica, El Panamá América ary ny El Día a Día. Mahazatra ny El Panamá América ny manao fanadihadiana sy manao fitarainana manohitra ny fitondrana, saingy vao novidian'ny fikambanana mitovy tombontsoa amin'ny fitondrana ilay vondrona mpampiely volana vitsy lasa izay.
Nampisy fiovana haingana teo amin'ny tondrozotram-panoratana teo amin'ny gazety isan-karazany izany fividianana azy izany, ary na dia tsy nosoritana ofisialy aza dia fantatry ny rehetra fa ho solovavan'ny fitondrana ny El Panamá América.
Noho izany fiovana izany dia maro ny mpanao gazety no nandao ny EPASA, ny sasany niala an-tsitrapo tahaka an'i Santiago Cumbrera; ny hafa voaroaka noho ny tsy fanarahana ny soritra vaovao napetraky ny gazety.
I Santiago Cumbrera moa namoaka taratasy tao amin'ny La Prensa [es] nizara ny antony nialàny. Nataony mazava tao amin'ny taratasy fa tsy nivonona ny hifampiraharaha izy:
Eto amin'ity kihon-dalana ity, sy ny ankoatra izay tsy tiako iadiana hevitra, aleoko miala toy izay hitehaka indray izay efa nokianiko. Tiako hatoky ny mpamaky fa tsy hanova sy hevitro sy ny fanaoko aho. Ary tsy hanofa ny tenako sy hamoaka vaovao avy aty amiko efa nangonin'olona hafa, ary izany dia ao anatin'ny fikendrena tsy iresahan'ny rehetra lohahevitra manan-danja ho an'ny firenena. Tsy hivarotra ny faharesen-dahatro ho an'izay mahasahy lafolafo kokoa aho, tahaka ny sasany izay milaza tena ho mahaleotena nefa manana ny fahaleovantenan'ny saribakoly, ary mitady laza na dia voatery handainga sy hanodikodina ny marina aza.
Ny fiampangan'ny filoha an'i Cumbrera moa dia niainga avy amin'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny La Prensa tamin'ny 20 Mey 2013, nitondra ny lohateny hoe “Indostrian'ny Angovo azo avy amin'ny rano: Aferan'ny Fahefana” [es], izay androhizan'i Cumbrera ny filoha sy ireo namany izay mitantana ny orinasa mpiteraka angovon'aratra.
Niaro tena tamin'ny fiampangan'ny filoha tao amin'ny kaontiny Twitter i Santiago Cumbrera (@santcumb) [es], nanazavany fa tsy noroahina izy fa niala noho ny antony efa nataony mazava tao amin'ny taratasy misokatra:
@santcumb: Niala tao amin'ny Epasa aho andro vitsy taorian'ny nahavitana ny fividianana ny gazety. Ny antony dia ao amin'ny taratasy efa nasehoko vahoaka.
Mpanao gazetin'ny EPASA hafa teo aloha, Eduardo Soto, namoaka hafatra fohy tao amin'ny blaogy Hojas Sueltas [es] nilazany indray ny antony nialany tao amin'ny orinasa ary nitaterany fa tondroina ao amin'ny sori-dalana vaovao ny “fanafenana, fitongilanana ary famitahana.” Nilaza ny heviny momba ny fialàn'i Santiago Cumbrera ihany koa i Soto:
Aoka hotsarovantsika fa mandrapahatonga ny fiovany tanana dia tsy nitsahatra ny mamoaka ny fanafintohinana sy ny fihetsika tsy mety nataon'ny fitondrana ankehitriny ny Panamá América. Ny anaran'i Santiago Cumbrera no any amin'ny ankamaroan'ireny lahatsoratra ireny. Tsy niandry ny horoahina i Santiago; efa nalefany ny fialany, tamin'ny filazany fa mpisandoka ireo mpitantana vaovao.
Nafanavain'ny fanamarihan'ny filoha ny tao amin'ny Twitter.
Luis Castillo (@Luis03Castillo) [es], ohatra, nampahatsiahy ny filoha fa niala i Cumbrera fa tsy voaroaka, ary niangavy azy mba ho matotra sy hahay hitondra tena mendrika ny toerana misy azy:
@Luis03Castillo: @rmartinelli Niara-niasa tamin'i Santiago Cumbrera tao amin'ny EPASA aho ary niala izy. Matoky an'izany aho. Mba matotra ary aza manadino ny fametrahana anao [eo amin'ny fitondrana].
Ny hafa kosa nikiry nilaza fa marina ny fiampangana. Abel D Pereambro (@AbelDPereambro) [es] nilaza fa tafaresaka tamin'ny iray amin'ireo lasibatra mihitsy ny tenany:
@AbelDPereambro: @RicardoLombanaG nifampiresaka tamin'ny iray tamin'ireo vehivavy tsy sasatry ny norebireben'i Santiago Cumbrera aho. Nitady fiarahana eny am-pandriana sy kolikoly izy. Olona adalam-behivavy io!
Yodalys Vasquez (@YodalisYodi) [es] nilaza fa afa-misitraka ny fahalalaham-pitenenana ihany koa ny filoha:
@YodalisYodi: Tokony hanana ny fahalalaham-pitenenana IHANY KOA ny filoha!
Nitaky tamin'ny filoha hampiseho ny porofon'ny fiampangany anefa i Edgardo Vidal (@EVidal1507) [es]:
@EVidal1507: Tokony hampiseho ny porofon'ny fiampangany ilay mpanao gazety Cumbrera ny filoha Martinelli… Mba fitenina filoha koa re izany!
Miandry fanazavana avy amin'ny filoha ny mpiserasera Panameana, raha tamin'ny toe-javatra nitovy tamin'izao dia tsy gaga ry zareo raha niafara tamin'ny fialantsiny fohy ny resaka sy ny fiampangana fa manodikodin-doha.